Tena Misy ve ny Demonia? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kyangonde Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nyungwe Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Eny. “Anjely nanota” tamin’Andriamanitra ny demonia. (2 Petera 2:4) I Satana Devoly no anjely voalohany nanao ny tenany ho demonia. Antsoina hoe “lehiben’ny demonia” izy ao amin’ny Baiboly.—Matio 12:24, 26.
Mpikomy tamin’ny andron’i Noa
Tantarain’ny Baiboly fa nisy anjely nikomy, talohan’ny Safodrano tamin’ny andron’i Noa. Hoy ny Genesisy 6:2: “Tsikaritr’ireo zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’olombelona. Koa nalain’izy ireo ho vady izay rehetra nofidiny.” “Nandao ny fonenana sahaza azy” tany an-danitra ireny anjely ratsy ireny, ary nitafy vatan’olombelona mba hahafahany hanao firaisana amin’ny vehivavy.—Joda 6.
Nialan’izy ireo ilay vatan’olombelona rehefa tonga ny Safodrano, ary niverina tany an-danitra izy ireo. Noroahin’Andriamanitra tsy ho anisan’ny fianakaviany anefa izy ireo. Nosazina izy ireo ka tsy navela hitafy vatan’olombelona intsony.—Efesianina 6:11, 12.
Lanitra Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly
Ny Anjely Tsara sy ny Anjely Ratsy
Resahin’ny Baiboly ny momba ny anjely tsara sy ny demonia. Tena misy ve izy ireo? Afaka manampy antsika ve izy ireo na mampijaly antsika?
Misy Anjely Ratsy Ve?